कमैया मुक्ति दिवस मनाईंदै, १७ वर्षमा पनि पूरा भएन कमैयाको समस्या
काठमाडौं, साउन २ । कमैया मुक्ति दिवस आज मनाईंदैछ । सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गरेको आज १७ वर्ष पूरा भएपनि अझैसम्म पनि उनीहरुको उचित पुनस्र्थापन हुन सकेको छैन ।
नागरिकता बनाउँदा १० हजार खर्च !
बनेपा, साउन २ । काभ्रेपलाञ्चोकको दुर्गम गाविस मानिने महाभारत शृङ्खलाडाँडापारिका बासिन्दा नागरिकता बनाउन रु १० हजारसम्म खर्च गरेर धुलिखेल आउन बाध्य भएका छन् ।
पहिरोबाट जोगिन भाग्दा भाग्दै महिला बेपत्ता
ताप्लेजुङ, साउन १ । ताप्लेजुङको तापेथोक गाविसस्थित घैयाबारी भिरबाट पहिरो झरेपछि भाग्ने क्रममा एक महिला बेपत्ता भएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा उत्रिए युवा (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं, साउन १ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा युवाहरुले आज शान्ति बाटिकामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
पानीको भाँडोमा डुबेर बालकको मृत्यु
रौतहट,साउन १ । रौतहटको लक्ष्मिनिया गाविसमा पानीको भाँडोमा डुबेर आज एकजना बालकको मृत्यु भएको छ ।
‘मेडिकल विश्वविद्यालय खोले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधान’
राजधानीमा आज गरिएको साक्षात्कारमा चिकित्सकहरुले मनमोहन अधिकारीका नाममा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्न सुुझाव दिँदै यसैले नै सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा काठमाडौंमा प्रदर्शन (भिडियोसहित)
काठमाडौं, साउन १ । चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा रहेको अनियमितताकाविरुद्धमा अनशनरत् प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा शनिबार राजधानीमा प्रदर्शन भएको छ । डा. केसीको मागमा समर्थन र सांसदहरुलाई दबाब दिने उद्देश्यले स्वतन्त्ररुपमा नागरिक प्रदर्शनी भएको हो ।
‘सरकारले २ लाख बराबरको जग्गा दियो, २ करोडको आय–आर्जन गर्छु’
डडेल्धुरा, साउन १ । पुस्तौंदेखि आफ्नो जग्गा नभएका डडेल्धुराका हलियाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएपछि खुसी भएका छन् । पुस्तौंदेखि मालिकको काम गर्दै आएका हलिया परिवारलाई सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिएपछि खुसी भएका हुन् ।
५ लाख विरुवा वितरण सुरु
कैलाली, साउन १ । जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले यो वर्ष ५ लाख विरुवा वितरण गर्न सुरु गरेको छ । निजी तथा सार्वजनिक जमिनमा वृक्षरोपणका लागि विरुवा वितरण गर्न थालिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पीडामाथि अर्को पीडाः भूकम्पपीडित जुकादेखि पहिरोसम्मको त्रासमा (भिडियोसहित)
दोलखा, साउन १ । दोलखाका भूकम्पप्रभावितहरुको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको छ । गत वर्ष गएको शक्तिशाली भूकम्पले अस्तव्यस्त बनाएर विस्थापित भएकाहरु अहिले बाढी, पहिरो र जुकाको त्रासमा जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
घरमै सुतिरहेकाबेला हात्तीको आक्रमण, बृद्धाको मृत्यु
चितवन, साउन १ । चितवनको माडीमा हात्तीको आक्रमणबाट एक बृद्धाको ज्यान गएको छ ।